YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, February 01
အမည် - ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း
လူမျိုး/ဘာသာ - ရှမ်း/ဗုဒ္ဓဘာသာ
မွေးသက္ကရာဇ် - ၁၉၅၀
မွေးဇာတိ - မူဆယ်မြို့
ပညာအရည်အချင်း - M.B.B.S (Mandalay)
အလုပ်အကိုင် - ပြင်ပဆေးကုသမှုလုပ်ငန်း (ယူလီခဆေးရုံ၊ ယူလီခဆေးခန်း)
လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှု - ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဗဟိုရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့
- ဥက္ကဋ္ဌ ၊ လားရှိုးမြို့နယ် ၊ ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/01/20110အကြံပြုခြင်း
Uploaded by thadarmay. - Watch the latest news videos.
1 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc
1687K View Download
1 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
3573K View Download
AAPP Press Release on Release over 2200 PPs Now!-Bur.pdf
804K View Download
AAPP Press Release on Release over 2200 PPs Now!-Eng.pdf
490K View Download
Release Over 2200 Political Prisoners NOW!.pdf
2158K View Download
Issues and Concerns Vol 6.pdf
1427K View Download
1 Feb 2011 Yeyintnge's Diary
Monday, 31 January 2011 16:15 ပူကျင့်ရှင်းထန်
၁။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် နှစ်ဆယ့်တစ်ဦးတို့က ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပင်လုံမြို့တွင် သမိုင်းမှတ်တိုက်တစ်ခုစိုက်ထူခဲ့ပေမဲ့။ ယခုအခါမှာ ယင်းသမိုင်း မှတ်တိုင် လှုပ်တုပ်တုပ်ဖြစ် နေပါပြီ။ ယင်းလှုပ်တုပ်တုပ်ဖြစ်နေသော သမိုင်းမှတ်တိုင်ကို ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဒုတိယပင်လုံ ညီလာခံ/၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပရန် ကျွန်န်ုပ်တို့က ၂၄-၁၀-၁၀ ရက်နေ့တွင် ကလေးမြို့၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြေညာ စာတမ်းအဖြစ် ပူးတွဲပါ ကြေညာစာတမ်းအတိုင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ၁၂-၂-၄၇ နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ပထမ ပင်လုံညီလာခံ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ တောင်းတန်းသားများ ဖြစ်ကြသည့် ရှမ်း၊ ကချင် နှင့် ချင်းတို့နှင့် ကြားဖြတ်ဗမာအစိုးရ (Interim Burmese Government) ပူးပေါင်းပြီး လွတ်လပ်ရေးအရယူပြီး၊ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်ထောင်စု စစ်စစ် ထူထောင်ရန်တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ပူးတွဲပါ ပင်လုံစာချုပ်အရ ပေါ်လွင်ထင်ရှားပါသည်။ ယင်းပင်လုံစာချုပ်မှာ အချက်ကိုးချက်ပါ၍ ၎င်းစာချုပ်၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို မေမြို့စုံစမ်းရေးခေါ်သည့် ဒုတိယစုံစမ်းရေး စာအုပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ယခုအခါမှာ ယင်းပထမပင်လုံညီလာခံ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များကို မှေးမှိန်လုမတတ်ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ/ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံ လိုအပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပင်လုံညီလာခံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမြော်အမြင်ကြီးစွာနှင့် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံအဖြစ် မှည့်ခေါ်သည်မှာ အလွန်လျော်ကန် သင့် မြတ်သည်ဟု ယုံကြည်သဖြင့် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာ ခံဟုပဲ သုံးစွဲကြပါစို့။
၃။ ၂၁- ရာစု ပင်လုံညီလာခံဟု ခေါ်ကြမည်ဆိုလျှင် ပင်လုံဆိုသည့် မြို့နာမည်ထည့်ဖို့လိုပါသေးသလားဟု မေးမည့် လူများရှိချင်ရှိမည်။ ပင်လုံဆိုတဲ့စကားလုံး ကြားလိုက်တာနှင့် တပြိုင်နက်ထဲ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပေါင်းစည်းရေး စိတ်ဓါတ်၊ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် နှိုးဆွပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပင်လုံတော့ထည့်ရမည်။ ပင်လုံဆိုသည့် နာမည်သည် ပြည်ထောင်စုနေ့ ပင်လုံစိတ်ဓါတ်ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဦးဆောင်စည်းရုံးသူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်း ပင်လုံစိတ်ဓါတ်၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်နှင့် ပင်လုံစာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၁၉၄၇-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၀-၁၈) ရက်ထိ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပထမ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွတ်တော်တွင် ပြောကြားရာ၌ ပင်လုံစာချုပ်၏ စာဖြင့် ရေးထားသောသဘောတူညီ ချက်များ (Agreement in written) ကိုသာမက၊ စာဖြင့် မရေးထားသော်လည်း ထိုသဘောတူညီချက်ကို ဖြစ်စေခဲ့သော စာချုပ်၏ အနှစ်သာရအရ (Agreement in Spirit) ကို လေးစားလိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း လေးနက်တည်ကြည်စွာ ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းပြင် အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရာမှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်လမ်းညွှန် ခုနှစ်ချက်ထားခဲ့သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးပြီး အခြေအနေဥပဒေ ပြဌာန်းလာသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားများရည်မှန်းထားသည့် ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် အခြေခံဥပေဒ ဖြစ်မလာဘူး။ ဤအချက်ကို Consitutional Advisor ဦးချန်ထွန်း (ဗိုလ်ချုပ်နှင့် အငြင်းပွားခဲ့ဘူးသူ) ကလည်း မှန်ကန် ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း Thinker က အောက်ပါအတိုင်း ရေးသည်။ "Constitutional Advisor admitted that Our constitution thought in theory federal is in practice unitary"
၄။ သို့ဖြစ်၍ ယခုအချိန်အထိ နှစ်ပေါင်း (၆၂) နှစ်အတွင် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ၊ ၁၉၅၈-ခုနှစ်က စတင်ခဲ့သော ပြောင်းလဲလာသော အစိုးရ အဆက်ဆက်တွင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် တန်းတူရေး သည် မှေးမှိန်ကွယ်ပျောက်သွားတဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် ဒီမိုကရေစီရေး တန်းတူရေးရာ ရှိရန်အတွက် ဥပဒေတွင်း၊ ဥပဒေပ (လက်နက်ကိုင်) တိုက်ပွဲများ ယခုထက်တိုင် အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ဗမာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားအားလုံးသည်တိုင်းရင်းသား ညီညွတ်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းတည်ဆောက်ခဲ့သော ပင်လုံစိတ်ဓါတ်၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်သည် ပျောက်ကွယ်လုမတတ် ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုစိတ်ဓါတ်ကို ပြည်လည်နှိုးဆွအသက်သွင်းရန် လိုအပ်လာပါသည်။ ယခု ၂၁-ရာစု ပင်လုံညီလာခံသည် ကလေးမြို့က ဆုံးဖြတ်ချက်ကြေညာစာတမ်းတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း တပြည်ထောင်စနစ်လည်းမဟုတ်၊ ခွဲထွက်ခွင့်လည်းမရှိသော ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် တည်ထောင်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မျှ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရန် မဟုတ်ပါ။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုကျင်းပရန် ရည်မှန်းထားသော ၂၁-ရာစု ပင်လုံညီလာခံသည်၊ အာဏာရ န-အ-ဖ အပါအဝင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တိုင်းရင်းသား ပါတီများ၊ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲအဆင့်ဆင့်တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် မျိုးချစ်နိုင်ငံရေးရဲဘော်ဟောင်းများ၊ ၈၈-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၊ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များနှင့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၊ အားလုံးစုပေါင်းညှိနှိုင်း၍ ၂၁-ရာစုပင်လုံညီလာခံခေါ်ယူကျင်းပရန် ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်နည်း လုပ်ဟန်သာလျှင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ငြိမ်းချမ်းစွာဖြစ်ပေါ်ရေး အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ၂၀၀၈- အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅၄ (က) နှင့် (ခ) အရဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးလက်ခံနိုင်သော ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ အမြန်ပေါ်ပေါက်ပါစေ!
ညီညွတ်မှု ဆိုတာကတော့ လက်တွေ့ လုပ်ယူရမယ့် ကိစ္စပါ။
မေးခွန်းကို ကျွန်မ နားလည်သလောက်က တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ကျွန်မတို့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေကြား ညီညွတ်မှုတွေ ရရင် ကျွန်မတို့နဲ့ လက်ရှိအစိုးရအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွေ ပေါ်ပေါက်လာမယ်။ ဒါကြောင့် ညီညွတ်မှု ရဖို့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ညီညွတ်မှု ဆိုတာကတော့ လက်တွေ့ လုပ်ယူရမယ့် ကိစ္စပါ။ တဖက်နဲ့ တဖက် နားလည်မှုရဖို့ တွေ့ဆုံတာ ပြောဆိုဆွေးနွေးတာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တာ အဲဒါတွေကို လုပ်ရမှာပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း အချင်းချင်း အကြား နားလည်မှု ညီညွတ်မှု လိုလားတဲ့စိတ်ကို အခြေခံပြီး၊ သံသယတွေ နည်းသွားစေဖို့၊ ယုံကြည်မှု တိုးပွားစေဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှာလုပ်မယ် ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ ပိုပြီး အမြန် အောင်မြင်မှာပါ။
ဧရာဝတီ Tuesday, 01 February 2011 17:23 ဆောင်းပါး
လွတ်လပ်ရေး ရပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်က ပေးတဲ့ အမြင့်ဆုံး သူရဲကောင်း ဘွဲ့တံဆိပ်ဟာ အောင်ဆန်းသူရိယ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရန်သူကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ သတ္တိ ဗျတ္တိနဲ့ ပြည်စုံသူ တပ်မတော်သားတွေကို ချီးမြှင့်ခဲ့တာ အခုထက်ထိ တပ်မတော်သား ၆ ဦးနဲ့ အရပ်သား ၁ ဦး ပေါင်း ၇ ဦး ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီး နောက်ပိုင်း လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးသြဇာ တရှိန်ထိုး ကြီးထွား လာတာကို မနာလိုမရှု့စိမ့် ဖြစ်ရာကနေ လွတ်လပ်ရေး သူရဲကောင်း နိုင်ငံ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သမိုင်းနဲ့ အမည်နာမ တွေကို မှေးမှိန်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ဒီဘွဲ့တံဆိပ်လည်း တိမ်ကော ပျောက်ကွယ် လာခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယနဲ့ တတိယအဆင့် သီဟသူရ ဘွဲ့နဲ့ သူရ ဘွဲ့တွေပဲ ချီးမြှင့်လာခဲ့ရာက ဒီနေ့အထိ သီဟ သူရ ၄၆ ယောက် သူရ ၅၁၇ ယောက်ကို တပ်မတော်ထဲမှာ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။
နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက် ၆၃ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနား၌ တွေ့ရသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သီဟ သူရ တင်အောင်မြင့်ဦး(ဓာတ်ပုံ - AP)
ဒီဘွဲ့ရတွေထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးကတော့ နေပြည်တော် နအဖ စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိ အတွင်းရေးမှူး ၁ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေပြီး အခု ဒု သမ္မတ အဖြစ် စစ်တပ်က ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း တင်သွင်း ခံရတဲ့ အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟ သူရ တင်အောင်မြင့်ဦး ပါပဲ။ ရည်မှန်းချက်ကြီးသူ စစ်သွေးစစ်မာန်အပြည့်နဲ့ မာရည်ကျောရည် ရှိသူလို့ ဆက်ဆံဖူးသူတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကတော့ လတ်တလော ခြအစားဆုံး ဒီ စစ်ဗိုလ်ချုပ် ဟောင်းကြီးဟာ လာမယ့် အစိုးရသစ်အဖွဲ့ထဲမှာလည်း အခုပုံစံနဲ့ ဆက်စားသွားရင် နံပါတ်ဝမ်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ခင်းပေးထားတဲ့ ကြိုးတန်းပေါ်က ဘယ်အချိန်ပြုတ်ကျမလဲ ဆိုတာ ကိုသာ စောင့်ကြည်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာဘ်စားတယ်ဆိုပြီး ဖြုတ်ခံထိသွားကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်း သူ့ရှေ့မှာ သင်ခန်း စာ ပေးသွားပြီးပြီ မဟုတ်လား။
သီဟ သူရ တင်အောင်မြင့်ဦး (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း)
၁၉၈၈ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုကြီးကို ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(ဗကပ)ရဲ့ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှု ကြောင့်လို့ စွပ်စွဲပြီး ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းနေချိန် မြန်မာပြည်အရှေ့ဘက်ခြမ်း တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ်တလွှားမှာ ဗကပ ထိုးစစ်ကိုလည်း မြန်မာ စစ်တပ်က အသည်းအသန် ခုခံရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာ DSA အပတ်စဉ် ၁၂ ဆင်း ဗိုလ်မှူး တင်အောင်မြင့်ဦးက ခလရ ၁၁ ဒု တပ်ရင်းမှူး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းခဲ့တယ်။ တပ်ရင်းမှူးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးစိုးလွင် တိုက်ပွဲကျသွားတော့ ဒု ရင်းမှူးဖြစ်တဲ့ တင်အောင်မြင့်ဦး က ကွပ်ကဲရတယ်။ သူ့ရဲဘော်တွေကတော့ သစ်ပင်နောက်မှာ အမြဲ ပုန်းဝပ်နေတတ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးလည်း နောက် ပိုင်းမှာ ဒဏ်ရာရပြီး သီဟ သူရ ဘွဲ့ကို ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။
အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့ ရာထူးတက်လမ်း မြန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ်၊ ၁၉၉၂-၉၃ ခုနှစ် မှာ တပ်မ ၃၃ မှာ ဗျူဟာမှူး၊ မကြာခင်မှာပဲ ဒု တပ်မှူး ရာထူးရပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ တပ်မမှူး ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရတယ်။ ၁၉၉၆-၁၉၉၇ မှာ အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းခဲ့တယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ န၀တ အစိုးရကနေ နအဖ အမည်ပြောင်းတဲ့ အခါမှာတော့ စစ်ကောင်စီ အသစ်မှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာ ခဲ့တယ်။
တပ်ထဲမှာတော့ ဒေါသကြီး မိုက်ရိုင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် တယောက်လို့ လူသိများသူပါ၊ နီးစပ်သူတွေ ပြောပြတာကတော့ တပ်ထဲမှာတုန်း က လက်ထဲမှာ ကြိမ်တုတ်ကို အမြဲကိုင်ထားပြီး ပါးစပ်ကလည်း မအေနှမ အမြဲကိုင်တုတ်နေသူ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း သူ့ကို အရာရှိ ငယ်တွေက ကြောက်ကြတယ်။
လူမွေးရာမှာ တော်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက လူပျော့တွေ(သူရရွှေမန်း၊ ကွယ်လွန်သူ ၀န်ကြီးချုပ် စိုးဝင်း၊ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်) တို့မှာ မရှိတဲ့ ဒီလို စရိုက်ဆိုးတွေနဲ့ ပြည့်တဲ့ သူကို လက်သပ်မွေးထားခဲ့တယ်။
ဘယ်လောက်အထိ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက မျက်နှာသာပေးခဲ့သလဲဆိုတော့ တပ်မတော်တခုလုံး ရဲ့ လက်နက်၊ ရိက္ခာ၊ အဆောက်အအုံ၊ ဘတ်ဂျက် စတာတွေကို စီမံကွပ်ကဲရတဲ့ စစ်ထောက်ချုပ်ရာထူးကို အငြိမ်းစား မပေးခင် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အထိ လုပ်ခိုင်းဖူးတယ်။ အလား တူပဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက သူ တလျှောက်လုံး တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရာထူးကို မကြာသေးခင်က ယာယီလွှဲပေးပြီး ရုရှား၊ တရုတ်၊ အာဆီယံနိုင်ငံ တွေမှာလုပ်တဲ့ စစ်ဘက်အစည်းအဝေးတွေကို တက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ အထိ မျက်နှာသာပေးခဲ့တယ်။ အခုလည်း ဒု သမ္မတ ရာထူးအတွက် စစ်တပ်ရဲ့တဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်နေရာ ပေးခဲ့တာကို ကြည့်ရင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ မျက်နှာသာပေးခြင်း က လျော့မသွားသေးဘူးလို့ ဆိုရမယ်။
ဒါပေမယ့် လာမယ့် အစိုးရသစ်မှာ သမ္မတ ဖြစ်မယ်လို့ သေချာနေတဲ့ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဘယ်လို ဆက်စခန်းသွားမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စား စရာပါ။ ဒီ ၂ ယောက်က အချင်းချင်း သိပ်အစေး မကပ်ပါဘူး။ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်း သေလို့ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် နဲ့ အစားထိုးတဲ့အခါ စစ်ကောင်စီရဲ့ အတွင်းရေးမှူး(၁)ရာထူးကို ဦးသိန်းစိန်ဆီက ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး လွှဲယူရတယ်။ မကြာပါဘူး သူ့ ရဲ့ ဉာဉ်ဆိုးအတိုင်း သူ့ရှေ့က ၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ၀င်ရောက် စွက်ဖက်ပြီး ပမာမခန့်လုပ်တော့တာပဲ။ ဘယ်လောက်အထိလဲဆိုတော့ ၀န်ကြီးချုပ်လုပ်တဲ့ စီမံကိန်းမှန်သမျှ ငွေချမပေးဘဲ ညစ်ခဲ့တာကြောင့် လုပ်ငန်းတွေ ပျက်ပြားခဲ့ရပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ကို အပြောသမား သက်သက်ဖြစ်အောင် စနစ်တကျ အကွက်ချပြီး နှိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် ၀န်ကြီးတွေ ကြားထဲမှာ ပြော စမတ် ဖြစ်လာတာကတော့ ၀န်ကြီးချုပ်ကို တွင်း(၁)က အာဏာသိမ်း လိုက်တယ် ဆိုတဲ့ စကားပဲ။ အခုလာမယ့် အစိုးရသစ်မှာကော သူလက်စွမ်း ဆက်ပြမှာလား။ လူတွေကတော့ ကောက်ချက်ချတယ်။ နာမည်မှာကိုပဲ အားလုံးထက် သူက ၆ လုံးပိုတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ၈ လုံးလို့ အမည်ပေးကြတယ်။
ဒီကြားထဲ ကံကလိုက်ချင်တော့ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး တာဝန်ယူထားတဲ့ ကုန်သွယ်ရေး ကောင်စီ(Trade Council) မှာ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပြန်တယ်။ ဇာတ်လမ်းက အခုမှစပါတော့တယ်။ မိုက်ရိုင်းထွားကြိုင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တယောက် စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ ပေါင်းမှ ငွေကြေးရဲ့ သြဇာခံ ဖြစ်သွားခဲ့ရပုံကတော့ သူ့ရှေ့က လာဘ်စားမှုနဲ့ ပြုတ်သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဘ တို့ထက်တောင် သာတယ်လို့ ပြောရမယ်။ သူက ၈ လုံး မဟုတ်လား။
Trade Council ဥက္ကဋ္ဌ ဆိုတာကလည်း အိတ်စ်ပို့၊ အင်ပို့ လိုင်စင်တွေ ချပေးခွင့်ရှိတယ်၊ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီကြီးတွေက လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့အတွက် သူ့ဆီမှာ ခွင့်တောင်းရတယ်၊ မြန်မာပြည်က ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ချင်ရင် သူဆီက ခွင့်တောင်း ရတယ် ဆိုတော့ မျိုးမျိုးမြက်မြက်ကလေး ကျန်မှာကတော့ မလွဲပါပဲ။
လူရမ်းကား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို လိမ္မာသွားအောင် အစစ အရာရာ သင်ကြားပေးနေသူကတော့ မက်စ်မြန်မာ ဇော်ဇော်ပါပဲ၊ သူတို့နှစ်ဦး ဆက်ဆံရေးကို လူတွေက သားအဖလို့တောင် ပြောကြတယ်။ Trade Council ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူး ရခါစမှာ ကားသွင်းခွင့် ပါမစ်တွေကို စစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင်လီမိတက်ထက် မက်စ်မြန်မာ ဇော်ဇော်ကို အများဆုံးသွင်းခွင့်ပေးခဲ့လို့ လူကုံထံ ဇိမ်ခံကား ကနေ မီးသတ်ကား အထိ သုံးလိုတဲ့သူတိုင်း ဇော်ဇော် ဆီက ပြန်ဝယ်ရတယ်၊ အဲသည့်အတွက် ဇော်ဇော်က ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အနေနဲ့ သူ့ကို အချိုးကျ အ
စစ်ထောက်ချုပ် ဘ၀မှာပဲ နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေးကို တာဝန်ယူရတော့ ပိုပြီးချမ်းသာဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နီးစပ်သူတွေ အ ပြော ကတော့ တပ်ချုပ်ကြီးကိုတော့ နှစ်လေးဆယ် အာမခံပါတယ်ဆိုပြီး နေပြည်တော် လမ်းတိုင်းကို အရည်အသွေးမစစ်ဆေးဘဲ မက်စ်မြန်မာ ဇော်ဇော်ကို အမြတ်များများ ကျန်အောင် ခင်းစေခဲ့တယ်။
နေပြည်တော် တည်ချိန်မှာပဲ သူ့ ပီအက်စ်အို ဗိုလ်ကြီး အေးချစ် ညီမ မအေးဟန်ကို ဇင်ထက် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီတခု ဖွင့်စေခဲ့ပြီး ACE ၊ အေဒင်၊ မက်စ်၊ အေရှားဝေါလ်၊ ထူး စတဲ့ နေပြည်တော် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေကို ဘိလပ်မြေ၊ သံချောင်း စတဲ့ ပစ္စည်းသွင်း စေခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း နေပြည်တော်က အစိုးရရုံးကြီးတွေနံရံမှာ အက်ကြောင်းတွေ ထနေပေမယ့်လည်း တာဝန်ယူတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ အရေးယူမခံခဲ့ရပါဘူး။
မအေးဟန်ဆို စင်္ကာပူ မှာတောင် ရုံးခန်းဖွင့်လိုက်သေး။ ဗိုလ်ကြီးအေးချစ် ကလည်း မီလျှံနာနီးပါး တခါတည်းချမ်းသာသွားတာ။ မဆလ လက်ထက်က တိုင်းမှူးတွေ ၀န်ကြီးတွေတောင် သူ့လောက် မချမ်းသာဖူးဘူး။ အင်းစိန် မင်းဓမ္မကုန်းဘက်မှာ မြေကွက်တွေ တော်တော်များများ ပိုင်တယ်လို့ စီးပွားရေးသမားတွေက ပြောကြတယ်။
စီးပွားရေးသမားတွေကို လူမွေးတဲ့ နေရာမှာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး က တေဇ၊ ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးမောင်အေးက အောင်ကိုဝင်း၊ ဦးရွှေမန်းက သူ့သားနှစ်ယောက်၊ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်က လားစိုးမြင့်ဆိုတဲ့ ရှမ်းတရုတ် ဆိုတော့ ဒု သမ္မတ ဖြစ်မယ့် လူရမ်းကား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့ ဇော်ဇော်တို့ ၂ ယောက် ပေါင်းသွားတာ သိပ်တော့လည်း မထူးဆန်းဘူး။
အတွင်းသိတွေ ပြောစကားကတော့ စစ်ထောက်ချုပ်ဘ၀ ကျောက်သူဌေး အိုက်လင်းနဲ့ ပေါင်းပြီး ကျောက်မျက်ပြပွဲက ပတ္တမြားနဲ့ ကျောက်စိမ်း ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို တရုတ်နဲ့ ထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ကျောက်ဈေးကွက်ကို မှောင်ခိုခိုးထုတ်ခဲ့တဲ့ ငွေမည်းတွေကို ခ၀ါချဖို့ နိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ ဇော်ဇော်ပိုင် ဧရာဝတီဘဏ်မှာ သူ့ရှယ်ယာတွေ ထည့်ထားတယ်၊ မြန်မာတပြည်လုံးမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ မက်စ်မြန်မာ လောင်စာဆီ ဆိုင်တိုင်းမှာ သူ့ပိုက်ဆံပါတယ် လို့လည်း သိရတယ်။ တနိုင်ငံလုံးရှိတဲ့ ဘောလုံးကွင်း တည်ဆောက်ပြုပြင်ရေး၊ ရန်ကင်းက သတ္တုတွင်း ၀န်ကြီးဌာန ရုံးဟောင်းကို ကလေးဆေးရုံးဆောက်ခွင့်တို့ကို ဇော်ဇော်ကို ပေးထားသလို အထူးအခွင့်အရေး အနေနဲ့ ရုရှားသံရုံးကလုပ်တဲ့ အခမ်းအနား တိုင်းမှာ ဇော်ဇော်ကို တက်ခွင့်ပေးခဲ့ တယ်။
နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်ဆိုသလို အစိုးရ စီမံကိန်းကြီးဖြစ်တဲ့ ထားဝယ်ရေနက် စီးပွားရေး အထူးဇုန် တည်ဆောက်ရေးကို လည်း ဇော်ဇော် တဦးတည်းကို ပေးခဲ့တယ်။ နီးစပ်သူတွေ အပြောကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးကို အကျိုးအမြတ်ရဲ့ တ၀က်ခွဲပေးရတယ်လို့ သိရတယ်။
ဇော်ဇော် အလိုက်သိတတ်ပုံကလည်း မိန်းမလိုက်စားတတ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အတွက် သူပိုင်တဲ့ မာရီနာ ဟိုတယ်မှာ အရက်ရော ကြက်ရော ရှာပေးတဲ့ အထိတဲ့။ ဒါ့အပြင် အင်းစိန် စက်မှုတက္ကသိုလ်အနီး အောင်သိဒ္ဓိလမ်းနဲ့ အေးရိပ်ငြိမ်လမ်းဆုံတဲ့ နေရာမှာ နန်းတော်ကြီးတမျှ တခမ်းတနား ဆောက်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အိမ်အတွက် အီတလီနိုင်ငံလုပ် အတွင်းပရိဘောဂတွေကို ဇော်ဇော် က ၀ယ်ထည့် ပေးခဲ့တယ်။ ဖိနပ်စင် တခုတောင် သိန်းလေးရာလောက် တန်တယ်လို့ အတွင်းသိ တချို့ကဆိုတယ်။ ခြံထဲက လမ်း တွေကို အားလုံး ကွန်ကရစ်တွေ ခင်းထားပြီး လုံခြုံရေး ဂိတ်တောင် နှစ်ထပ်တိုက် ဆောက်ထားတယ်တဲ့။
ဒါတင်မက အရှေ့မြောက်တိုင်း တိုင်းမှူးဘ၀နဲ့ ပုလဲနံပ သင့်ခဲ့ပြီး သူ့ကို အကျိုးခံစားခွင့် များများပေးတဲ့ ဘိန်းဘုရင် လော်စစ်ဟန် သား ထွန်းမြင့်နိုင် ရဲ့အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီကိုလည်း ရန်ကုန်-မန္တလေး-လားရှိုး လမ်းပြုပြင်ရေး၊ ရန်ကုန်လေဆိပ်နဲ့ တနိုင်ငံလုံး လေဆိပ် ပြေးလမ်းတို့ချဲ့ရေးတို့ အပြင် နေပြည်တော် လေဆိပ်အသစ် တည်ဆောက်ရေးကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ အမှတ် ၁ လျှပ်စစ် ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျော်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းတိုင်း အေးရှားဝေါလ်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ကတောင် ခေါ်ယူ သတိပေးရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ နီးစပ်သူတွေက ပြောတယ်။
ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းကို သူ့သား ဗိုလ်ကြီးဟောင်း တေဇာစောဦး ရှယ်ယာပါတဲ့ အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီ ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ချပေးပေမယ့် တရုတ်ကုမ္ပဏီက ငြင်းပယ်ပြီး တေဇပိုင် ထူးကုမ္ပဏီနဲ့ လုပ်မယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့အတွက် အတွင်းရေးမှူး (၁) ကြီး အရှက်ရခဲ့လို့ ထူးကုမ္ပဏီက မနည်းဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်၊ တွင်း(၁)ကြီး အမျက်ပြေဖို့ အေးရှားဝေါလ်ကို တဆင့်ခံ ကန်ထရိုက် အနေနဲ့ ထူးက လုပ်ငန်းတချို့ လွှဲပေးခဲ့ရတယ်။
စီးပွားရေး သောင်းကျန်းလို့ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို စင်္ကာပူ ဘဏ်မှာ အပ်ဖို့ မကြာခင်ကအသွား ဒေါ်လာတွေ တပွေ့တပိုက် အိတ်ထဲ ထည့်လာတဲ့ တေဇာစောဦး ချန်ဂီ လေဆိပ်မှာ မသင်္ကာဖြစ်ပြီး ခဏတောင် အစွဲခံလိုက်ရသေးတယ်။ နောက်မှ စင်္ကာပူက လာနေကြ ကတ်စတမ်မာ မှန်း သိလို့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။
လူတွေကတော့ ပြောနေကြတယ်။ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး တကယ် သတ္တိရှိပုံ မပေါ်ဘူးတဲ့။ သီဟ သူရ ဘွဲ့ရတိုင်း သတ္တိရှိတယ်လို့ ပြော မရဘူး။ မိုက်ရူးရဲလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲတဲ့။ တကယ် သတ္တိရှိရင် ဥပဒေ အတိုင်း ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တကယ်ကြေညာ တဲ့။ ကဲ... ဒု သမ္မတကြီး သီဟ သူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး ခင်ဗျာ.. အလှည့်ကျ မနွဲ့ကြစတမ်း ပေါ့နော...။
ဧရာဝတီ Wednesday, 26 January 2011 17:47 ဆောင်းပါး
ဥပဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေရဆိုတာ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူအဖွဲ့ အစည်းတိုင်းရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှူး ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် အပါအ၀င် စစ်ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်တွေကို လာဘ်စားမှု၊ အာဏာအလွဲသုံးစား လုပ်မှုတွေနဲ့စွပ်စွဲလို့ ဖမ်းဆီးအပြီး တပ်မတော် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် နံပါတ် ၃ နေရာကို အရှင်မွေးတော့ နေချင်း ညချင်းကြီးကာ ရောက်လာသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရ ဦးရွှေမန်း က ဒီစကားကိုပြောတော့ လူတွေက ကောက်ချက်ချကြတယ်။ “အပြောကတော့ ရွှေမန်း” တဲ့။ အခုလာမယ့် အစိုးရ အသစ်မှာလည်း သမ္မတလား၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌလား။ ရှေ့တန်းက သတင်းပြေးနေပါ တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ္စည်း ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ အတိအလင်းကြေညာရမှာပါ။ ကြေညာသည် ဆိုဦးတော့ အပြောလောက်နဲ့တင် မပြီးပါ။ မှတ်ကျောက် အတင် ခံဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အခုထက်ထိတော့ သူရ ဦးရွှေမန်းကို အက ကတော့ ချိုမိုင်မိုင် လောက်ပဲလို့ ပြောဆို သံတွေသာ ဆူညံနေရဲ့။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြုံယမ်းမြို့၌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ ရွှေမန်းနှင့် မြောက်ကိုရီးယား စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ကင်မ်ကျုတ်ဆစ် (Kim Kyok-sik) တို့ နှစ်နိုင်ငံ စစ်ရေးအရ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ရန် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ် ရေးထိုးနေစဉ်
သူရ ဦးရွှေမန်း (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း)
၁၉၆၉ ခုနှစ် DSA အပါတ်စဉ် ၁၁ က ဆင်းတဲ့ သူရ ဦးရွှေမန်းဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးကို စစ်တပ်ကအကြမ်း ဖက် နှိမ်နင်းတုန်းက ဗိုလ်မှူး အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာတော့ ကရင်သူပုန်တွေကို တိုက်ရာမှာ အစွမ်းပြနိုင်ခဲ့လို့ သူရ ဘွဲ့တံဆိပ်ကို ရခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်အထိ ရာထူးဆက်တိုက် တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရတယ်။ ၁၉၉၁ မှာ တပ်မ ၆၆ ရဲ့ ဗျူဟာမှူး၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ် မှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် အဆင့် တိုးမြှင့်ခံရပြီး ရန်ကုန်လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူတဲ့ တပ်မ ၁၁ ရဲ့ တပ်မမှူး ဖြစ်လာတယ်။ နောက်တနှစ် အကြာ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့မှာ အနောက်တောင်တိုင်း တိုင်းမှူးဖြစ်လာပြီး နအဖ စစ်ကောင်စီရဲ့ယာယီအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာတယ်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရပြီး စစ်ကောင်စီရဲ့ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာတော့တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ကလည်း ဦးရွှေမန်းကို ဘယ်လောက်အထိ ယုံသလဲဆိုတော့ တပ်အပေါ် သြဇာအရှိဆုံး တယောက် ဖြစ် တဲ့ စစ်တပ်ကို ပိုက်ဆံရှာပေးနေရတဲ့ ဦးပိုင်လီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်းလည်းဖြစ် စစ်ထောက်ချုပ်ဟောင်းလည်း ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အေးနဲ့ တွဲပြီး၂၀၀၈ မှာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ၀ယ်ယူဖို့ မြောက်ကိုရီးယားကို စေလွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွှေမန်းကလည်း တပ်အသိုင်းအ၀န်းအတွင်းမှာ လူရှိန်အောင် စမတ်ကျကျ နေတတ်တယ်၊ အနေအထိုင်ဟော့ဟော့ ရမ်းရမ်းမရှိ၊ အသောက်အစားကလည်း လူကြီး လူကောင်းဆန်ဆန်။ တပ်ထဲမှာဆိုရင် တခြားဗိုက်ပူ ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ မတူဘဲ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းနဲ့ သူ့ကို စမတ်ကျတယ်ဆိုပြီး အမှတ်ပေးကြတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် စမတ်ကျသလဲ ဆိုရင် တခြား ဗိုလ်ချုပ်တွေလို မိန်းမကြိုက်တတ်တာကိုတောင် သူ့ဆရာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မသိဘူးလို့ ပြောရမယ်။
စစ်သား စစ်ဗိုလ်ဆိုတာ မိန်းမကိစ္စနဲ့ မကင်းတာ ဓမ္မတာပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် သူ့ရှေ့က မျိုးချစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ မတူတာကတော့ သူရ ဦးရွှေမန်း က နိုင်ငံတကာအမြင် ပိုရှိတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ နီးစပ်သူတွေရဲ့ အဆိုအရတော့ ဦးရွှေမန်းဟာ ပြည်တွင်း ဖြစ်ထက် ထိုင်းနဲ့ အနောက်တိုင်းသူတွေကိုမှ ပိုပြီး အာသီသရှိသတဲ့၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းကတော့ သူ့သား အောင်သက်မန်းရဲ့ဆရာ ဦးတေဇ ပါပဲ၊ အဲပုဂံ နဲ့ ဘန်ကောက်က သွားပင့်လာပြီး ရန်ကုန်က ထိပ်တန်း ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာ ပျော်ပါးသတဲ့။
ပြည်တွင်းရေးမှာလည်း ကျယ်ပြန့်တဲ့ အမြင်ရှိပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားတင်ပို့ရေး ကဏ္ဍတွေမှာ ခေတ် မီ ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံစီးပွားထက်စာရင် မိသားစု အကျိုးစီးပွားက ပိုများနေမလားပဲ။ တကယ်တမ်း လည်း သူရဦးရွှေမန်း အနောက်တောင်တိုင်းမှူး ဖြစ်စဉ်တုန်းကတည်းက သားကြီး သြရသ အောင်သက်မန်းရဲ့ ဧရာရွှေဝါ ကုမ္ပဏီ ဟာ ဧရာဝတီတိုင်း တတိုင်းလုံးအတွက် မြေသြဇာ ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကို တဦးတည်းပိုင် အဖြစ်နဲ့ ၀င်ငွေလမ်းဖြောင့်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ လယ်ဧက သုံးသောင်းကျော်ကို ကုမ္ပဏီပိုင် လုပ်ခဲ့လို့ လယ်သမားတချို့ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့တယ်။၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူး လက်ခံအပြီး ၂ နှစ်အကြာ ၂၀၀၅ မှာ ဧရာရွှေဝါဟာ စင်ကာပူနဲ့ ဘင်္ဂလား ဒေရှ့်ကို ဆန်တင်ပို့ ရောင်းချခွင့် လိုင်စင် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီကို ဆန် ပြည်ပတင်ပို့ခွင့် ပထမဦးဆုံး ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းပါ။
အောင်သက်မန်းရဲ့ ဧရာရွှေဝါကုမ္ပဏီဟာ ၁၉၉၇ ကတည်းက ဦးတေဇရဲ့ထူး ကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ စားအုန်း ဆီ၊ ဓာတ်မြေသြဇာနဲ့ လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာများနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း၊ ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း၊ ဆန်၊ ပဲ၊ သစ်၊ ငါး ပုစွန် စတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တင်ပို့ရေးအပြင် လောင်စာဆီတင်သွင်း ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်း တွေကို လုပ်ကိုင် နေပါပြီ။ နီးစပ်သူတယောက်ကတော့ “လက်နက်ကလွဲရင် အကုန်လုပ်တယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
မိုးကုတ်နဲ့ ဖားကန့်မှာလည်း ကျောက်တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေ အကြီးအကျယ်လုပ်နေပြီး ရန်ကုန်မှာလည်း မြေကွက်အမြောက် အမြား ပိုင်ထားတယ်။ ဘန်ကောက်၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူနဲ့ သြစတြေးလျမှာ ကွန်ဒိုတွေ ၀ယ်ထားပြီး အမေရိကန်ရဲ့ ဆန်ရှင်ကို ရှောင်ဖို့ မလေးရှားနဲ့ ထိုင်းက ဘဏ်တွေမှာ ငွေစာရင်း ဖွင့်ထားတယ်လို့ အတွင်းသိတွေက ဆိုတယ်။
လတ်တလောပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ နအဖ စစ်ကောင်စီရဲ့ အစည်းအဝေးက ထွက်လာတဲ့ သတင်းအရ သူရ ဦးရွှေမန်း လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ကြီး အနေနဲ့ တကယ်လို့များ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းကို ကြေညာတဲ့အခါ“ကျနော့် သားတွေ ပိုင်တာ ကျနော်ပိုင်တာ မဟုတ်ဘူး”လို့ အရူးကွက် နင်းမှာကိုတော့ ကြိုသိနေပါကြောင်း။ ။
နောက်လာမယ့် အပိုင်း (၃) မှာ အတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သီဟ သူရ တင်အောင်မြင့်ဦး အကြောင်း တင်ပြပါဦးမယ်။ စောင့်မျှော် အားပေးကြပါကုန်။
ဧရာဝတီ Monday, 24 January 2011 19:16 ဆောင်းပါး
ဒီလကုန်ရင် နေပြည်တော်မှာ လွှတ်တော် ခေါ်တော့မယ်။ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ပြောင်းသွားမယ်လို့ ယူဆသူ တချို့ ရှိပေမယ့် မြန်မာ လူထု အများစုကတော့ ဘာမှ မပြောင်းဘူးလို့ ပြောနေကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့ အပေါင်းအပါ မိသားစုဝင်တွေ စိတ် ထင်တိုင်း ကျဲနေတာကို တရားဝင်မှု ပြုပေးရုံ လွှတ်တော် အမည်ခံ သက်သက်ပဲလို့ ဆိုကြတယ်။ လာမယ့် အစိုးရသစ်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်လုပ်ရင်လုပ်၊ မလုပ်ရင် သူ့သစ္စာခံတွေကို သူကောင်းပြု ခန့်ထားမှာ လို့လည်း ပြောကြတယ်။
ဘယ်သူပဲ တက်တက် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေအတိုင်း ကြေညာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အနေအထားကတော့ အစိုးရသစ်ကို ဆက်ပြီး ဦးဆောင်မယ်လို့ သတင်းပြေးနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အပါအ၀င် သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး၊ ဦးရွှေမန်းနဲ့ လက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် တို့ အပြင် နေပြည်တော်က စစ်အာဏာပိုင်တွေ အတွက် ဒီ ဥပဒေက အရာမ၀င်ဖြစ်နေရတယ်။ ဥပဒေအထက်မှာ ထင်ရာဆိုင်းနေကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး နဲ့ အပေါင်းအပါတွေ အကြောင်း တစေ့တစောင်းကို ဧရာဝတီ က ဖော်ထုတ် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၁ ခု ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်က နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသည့် ၆၃ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ညစာ စားပွဲတွင် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များကို နှုတ်ဆက်နေသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ဇနီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် (ဓာတ်ပုံ - AP)
ကွယ်လွန်သူ အာဏာရှင်ကြီး ဦးနေ၀င်းက နိုင်ငံတော် အစည်း အဝေးတွေမှာ သူများထက်မြင့်တဲ့ ထိုင်ခုံနဲ့ ထိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ စစ်အာဏာရှင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ လက်ထက်မှာတော့ မိသားစုဝင် တွေပါ သူများထက် ခေါင်းတလုံး ပိုမြင့်ချင်ကြတယ်။ နိုင်ငံတော် ပွဲတွေဆို ရှေ့ဆုံးမှာ နေရာယူ ကြတယ်၊၊ ပဒေသရာဇ် စိတ်ဝင်နေတဲ့ ဒီမိသားစုဟာ ဘယ်လောက်အထိ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာ မသိနိုင် လောက်အောင်ပါပဲ။
လေ့လာ သုံးသပ်သူတွေ အဆိုအရ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေ ရှင်းတမ်းမှာ တဒေါ်လာ ၆ ကျပ်နဲ့ စာရင်းပြထားလို့ ပိုနေတဲ့ ဘီလျံနဲ့ ချီတဲ့ ဂက်စ်ရောင်းရ ငွေတွေဟာ စင်ကာပူ ဘဏ်တွေမှာ စာရင်းဖွင့် အပ်ထားကြောင်း သိရတယ်။ အဲ့ဒီငွေတွေကို စာရင်းကိုင်ဖို့ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အေးက တာဝန်ယူရတယ်။ တရုတ်ပြည် ပီကင်းနဲ့ ရှန်ဟိုင်းမှာလည်း အိမ်တွေ ၀ယ်ထားတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ပြည်တွင်းမှာကတော့ လက်ညှိုးညွှန်ရာ အကုန်ပိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေ အဆိုအရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မပါဘဲ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်နဲ့ သမီးတွေ မကြာခဏ တိုင်းခန်းလှည့်လည် သလိုမျိုး ခရီးထွက် တတ်တယ်၊ သူတို့ ရောက်လာရင်လည်း ရောက်ရာ အရပ်က တိုင်းမှူး တပ်မမှူးတွေက စိတ်ညစ်ရတယ်လို့ ဆိုတယ်၊၊ ဈေးတွေ၊ ရှော့ပင်းမောလ်တွေ၊ စူပါ မားကက်တွေကို ရောက်ရင်လည်း လက်ညှိုထိုးပြီး ယူကြသလို၊ စိန်၊ ရွှေ လက်ဝတ်ရတနာ တွေကိုလည်း တိုင်းမှူး တပ်မမှူး ကတော် တွေက ဗန်းနဲ့ ယူပြရတယ်။ သူတို့က ကြိုက်တာရွေးပြီး တခါယူရင် အောက်ထစ် သိန်းနှစ်ထောင် ဖိုးလောက် ယူတယ်။ အဲဒီလို ယူတာတွေကို တိုင်းမှူးတွေက နောက်ကနေ လိုက်ရှင်းပေးရတယ်။ ဒီမိသားစု စိန်ကြိုက်တတ်ပုံကိုတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ လူတွေ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ကြည့်လိုက်ရတဲ့ သမီးတော် သန္တာရွှေ ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယို အခွေမှာ အမြည်းအစမ်း သဘောတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။
ရှေးမြန်မာမင်းများထုံး နှလုံးမူသလားတော့ မသိဘူး။ မကွေး၊ မုံရွာ နယ်တွေဘက်မှာရှိတဲ့ လက်ယက်ရေနံတွင်းတွေ တူးဖော်ခွင့်၊ ကောလင်း၊ ၀န်းသို၊ မုံရွာနယ်က ရွှေတူးဖော်ခွင့်တွေအားလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားပြီး တခြားသူတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြန်ချပေးတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့် လိုင်စင်တွေကိုတော့ ဒေသဆိုင်ရာ တိုင်းမှူးတွေက တဆင့်လျှောက်ရတယ်။ လိုင်စင်ကြေးကတော့ တဧက ကို သိန်း ၃၀ ပေါက်ဈေး ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဧက ၁၀၀၀ ဆိုရင် ကျပ်ငွေ သိန်း တသောင်း။ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ သန်း နဲ့ ညီမျှတဲ့ ငွေကို နှစ်စဉ်ကြေး ပေးကြရတယ်။ သူတို့ဆီကနေ ပြန်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ယူတဲ့သူတွေထဲမှာတော့ မုံရွာမှာ လက်ရှိ ရေနံ တူးနေတဲ့ မန္တလေးမြို့က တရုတ်သူဌေး ဂရိတ်ဝေါလ် အုပ်စုလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဟွန်ဒါ တင်မောင်က အများဆုံး ယူထားတယ်။
နေပြည်တော်နဲ့ မေမြို့မှာလည်း အကောင်းဆုံး အိမ်တွေ ခြံတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ အားမရဘူး။ ရန်ကုန်မြို့က အင်းလျားကန် အနီးတ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ ကောင်းပေ့ညွန့်ပေ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်နဲ့ စစ်တပ်ပိုင်မြေတွေကိုလည်း ယူထားပြီးပြီလို့ သိရတယ်။ ရန်ကုန် ပြည် လမ်းနဲ့ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းကြား၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ပါရမီလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့ ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်း စက်ရုံ (ကပစ ၁၊ ကပစ ၄) တပ်နေရာတွေကိုလည်း အခု ဖယ်ရှားခိုင်းပြီး သူတို့မိသားစု ယူထားတယ်လို့ သိရတယ်။
အလားတူပဲ ပြည်လမ်း ရိုးမရိပ်သာနားက အင်းလျားလမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့ အရင် မိသားစုအမွေမှု ဖြစ်နေတဲ့အိမ်(မြို့နယ် ငြိမ်ဝပ် ပိပြား ရေး ရုံးဟောင်း) ကို ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျလို့ ကွယ်လွန်ရသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး ဇနီး ဒေါ်ခင်သန်းနွဲ့ကို ပေးပေမယ့် မယူတဲ့ အတွက် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်က ယူပြီး ဦးတေဇက နာမည်ခံပေး ထားရတယ်။ စီးပွားရေး အသိုင်းအ၀န်းမှာတော့ ဦးတေဇဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး တို့ မိသားစု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဦးဆောင်လုပ်ပေးနေရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံလုပ်ဖို့ ဦးတေဇ ၀ယ်ယူလိုက်တဲ့ အင်းလျားကန်ထိပ်က ကန်သာယာဆေးရုံမှာလည်း သမီးတွေရှယ်ယာ ငွေ ပါတယ်၊ ငွေဆောင်ကမ်းခြေနဲ့ ချောင်းသာက ဦးတေဇပိုင် ဟိုတယ်တွေမှာလည်း ရှယ်ယာထည့်ထားတယ်လို့ သိရတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတို့ မိသားစု စီးပွားရေး သောင်းကျန်းတာကတော့ နောက်ဆုံး ဖိုးလပြည့်တောင် မကျန်ဘူးလို့ ဆိုရမယ်။ တရားဝင် ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့ စီးပွားရေး လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ အဘိုး အရှိန်အ၀ါနဲ့ မာဖီးယား ဆန်ဆန် မျက်နှာပြပြီး ပွဲစားစီးပွားရေးမျိုး လုပ်နေတာပါ။
သူ့လုပ်နည်းလုပ်ဟန်က တချို့ကုမ္ပဏီတွေ တရားမ၀င် ပစ္စည်းတွေသွင်းလာရင် အကောက်ခွန်ဌာနက အစစ်အဆေးမခံရ အောင် တရားဝင် အခွန်မဆောင်ရအောင် ဆိပ်ကမ်းမှာရှင်းပေးတယ်။ ၀န်ဆောင်မှု အနေနဲ့ကတော့ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည် ပြီး ပိုက်ဆံယူတယ်။ ဒါ့အပြင် ရန်ကုန်မြို့က မြေနေရာတွေမှာ အလုပ်လုပ်လိုတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ၀န်ကြီးတွေ ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ ပွဲစားမျိုးလည်း လုပ်တယ်။
အထင်ရှားဆုံးကတော့ ပြည်လမ်းနဲ့ မနော်ဟရီလမ်း အတွင်းမှာရှိတဲ့ ထိုင်းသံရုံးဘေးက ဖျာပုံမမြနွယ်ခြံလို့ လူသိများတဲ့ မြေကွက်ကြီး ကို ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်တဲ့ နိုင်ဂရု(Naing Group)က ကုလားသူဌေးတွေ ၀ယ်ယူရာမှာ မြို့တော် စည်ပင်က အတည်မပြုပေးတဲ့ အတွက် ကုမ္ပဏီက ဖိုးလပြည့်ကို ကျပ် သိန်း ၅၀၀၀ ပေးပြီး မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်းကို နားချပေးခိုင်း တာပါ။
ဖိုးလပြည့်ဟာ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေကိုမှ ဗိုလ်မထားပါဘူး။ နေရာကောင်းမှာ ဆိုင်ဖွင့်ထား တဲ့ အတွင်းရေးမှူး(၁)သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး ရဲ့သား ဗိုလ်ကြီး ဟောင်း တေဇာစောဦး လုပ်ကိုင်နေတဲ့ “7 Lekker” ကော်ဖီ ဆိုင်ကို နောက်လိုက်တွေ စေလွှတ်ပြီး ဖျက်ဆီးပြခဲ့သလို သူပွဲစားလုပ်နေတဲ့ ပြည်သူ့ ဥယျာဉ်ထဲက မြေကွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာ ကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး(ကက ၀ယ်) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ် ၀င်းလှိုင်ရဲ့သား ၀င်းထွေးလှိုင်က ၀င်လာလို့ နောက်လိုက်တွေကို ရိုက်နှက်ဖို့ ခိုင်းစေခဲ့ဖူးပါတယ်။
အနိုင်ကျင့်တဲ့နေရာမှာတော့ အဘိုးခြေရာမီပါတယ်။ ဖိုးလပြည့်ဟာ သူ့မကောင်းကြောင်း Facebookမှာ ရေးမိတဲ့ အမေရိကားနေ သူငယ်ချင်းတယောက်ကို မြန်မာပြည် ပြန်အလာ ရဲနဲ့ ဖမ်းခိုင်းပြီး ဒုက္ခပေးခဲ့တာကြောင့် မိဘများ အခက် ကြုံခဲ့ရတယ်။၂၀၀၉ ခုနှစ် တုန်းကလည်း စင်ကာပူမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက် အလားတူမကောင်းကြောင်း ရေးမိတဲ့ အတွက် ရန်ကုန်မြို့က အဲ့ဒီ သူငယ်ချင်းမိဘတွေရဲ့ အိမ်ကို ခဲနဲ့ထု၊ လူတွေကို ရဲနဲ့ဖမ်းခိုင်းပြီး ဦးချတောင်းပန်ခိုင်းတဲ့အတွက် မိဘတွေမှာ သား ဇော ကြောင့် ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ဦးချတောင်းပန်ခဲ့ရတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလတုန်းက ရန်ကုန်မြို့ လမ်း ၅၀ မှာရှိတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက် ရုံး ကားရပ်နားရာ နေရာမှာ နိုင်ငံခြား ရေး ၀န်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်ကြီးတဦး က ဖိုးလပြည့်ကားရှေ့မှာ ပိတ်ရပ်မိတဲ့ အတွက် အိမ်ကို ခေါ်သွားပြီး ဆုံးမသြ၀ါဒ ပေးခဲ့တာကို အဲဒီဗိုလ်ကြီး က သတိအနေအထားနဲ့ နာယူရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အလားတူ အဲပုဂံရဲ့ နေပြည်တော်သွား ပြည်တွင်းခရီးစဉ်တခုမှာ ဖိုးလပြည့်နဲ့ အပေါင်းအပါ အုပ်စုရောက်လာခဲ့လို့ အရင်ရောက်နှင့် နေပြီး ဗီအိုင်ပီ အတန်းမှာ နေရာယူထားတဲ့ ဦးရွှေမန်းရဲ့သား အောင်သက်မန်း က အောင့်သက်သက်နဲ့ ရိုးရိုးတန်းကို ပြောင်းပေး လိုက်ရတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မိသားစုရဲ့ မတရားမှုတွေက ဒီလောက်နဲ့တင် ရပ်မသွားပါဘူး။ အရည်အချင်း ပြည့်ဝ၏ မပြည့်ဝ၏ နောက်ထား။ အာဏာရှင်ကြီး ဦးနေ၀င်း လက်ထက်ကတောင် မလုပ်ခဲ့တဲ့ စင်ကာပူ၊ တရုတ်နိုင်ငံက သံရုံး တွေမှာ သမီးတွေကို အကြီးတန်း သံတမန် ရာထူးတွေ ခန့်ထားခဲ့တယ်။ သမီးတွေကတော့ သံတမန်အလုပ်ထက် သံရုံးက ကောက်ထားတဲ့ အခွန်ငွေတွေကို အချိန် မှန်လာရောက် သိမ်းတဲ့ အလုပ်ကိုပဲ လုပ်တယ်။ သားတွေဖြစ်တဲ့ ထွန်းနိုင်ရွှေ၊ ကြိုင်ဆန်းရွှေ တို့ကတော့ နေပြည်တော်က ဟိုတယ် လုပ်ငန်းတွေနဲ့ မြန်မာပြည်အနှံ့ လက်ညှိုးထိုး မလွဲအောင် မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ လောင်စာဆီ ဆိုင်တွေကို ပိုင်ကြတယ်။ နာမည်ကြီး ဂျေဒိုးနတ်ဆိုလည်း ထွန်းနိုင်ရွှေ ပိုင်တာပဲ။ ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီ မြန်မာ ဗွီအီးအက်စ် ဆိုလည်း ကိုမိုးနီဆိုတဲ့ စီးပွားရေးသမား တယောက်နဲ့ တွဲလုပ်တယ်။ ပဲခူးမှာလည်း သစ်အချောထည် စက်ရုံထောင်ထားသေးတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မိသားစုက ဒီလို မြန်မာတပြည်လုံးမှာ ထင်သလို ချယ်လှယ်ပိုင်ခွင့်၊ ထင်ရာဆိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိနေတာဟာ ရှေးဘ၀ ကုသိုလ် ကြောင့် ဒီဘ၀မှာ အကျိုးပေးတာလို့ နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှေးကုသိုလ်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ယူနီဖောင်း ချွတ်မချွတ်နဲ့ သက်ဆိုင်နေကြောင်း သူတို့ ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်နေကြတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အသက်အရွယ် ထောက်လာလို့ နားချင်တယ်ဆိုတာတောင် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်က နားခွင့်မပေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိ စစ်တပ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟာ နောက်တက်လာမယ့် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို စိတ်မချသလို အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်းလို ကျ ဆုံးခန်းရောက်မှာမျိူးကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် သီဟ သူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနဲ့ ဦးတင်အေးကိုလည်း လက်ရှိ စစ်တပ် ခေါင်းဆောင် ငယ်တွေကို စိတ်ချလက်ချ လွှတ်မထားဖို့ ပြောဆိုကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ စစ်ထောက်ချုပ်နဲ့ စစ်ရေးချုပ်ဟာ နာမည်သာရှိပြီး တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကတော့ မရှိသေးပါဘူး။
သမ္မတကြီးပဲ လုပ်မှာလား၊ နာယက ကြီးပဲ လုပ်မှာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကတော့ မကြာခင် ရုပ်လုံးပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယူ ဆ ရပါတယ်။ လူတွေကတော့ အနားယူတယ်ဆိုတာ အနားကပ်တော့မှ သိမ်းကျုံးယူသွားတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ တကယ် အနားယူတယ်ဆိုဦးတော့ မိသားစု အနာဂတ် လုံခြုံရေး စိတ်ချရအောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စီမံထားပြီးပါပြီ။ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းမှာ နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး မကြာခင်က အငြိမ်းစားယူသွားတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းဟန်ကို Eagle Security ဆိုတဲ့ လုံခြုံရေး ကုမ္ပဏီဖွဲ့စေပြီး မိသားစုလုံခြုံရေးကို လက်ရှိ စောင့်ရှောက် ခိုင်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်လာမယ့် အပိုင်း (၂) မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးရွှေမန်း အကြောင်း တင်ပြပါဦးမယ်။ စောင့်မျှော် အားပေးကြပါကုန်။
အမေရိက နေထိုင်တဲ့ အီဂျစ်များ အဝေးက ညာသံပေးမနေဘဲ တိုင်းပြည်ပြန်လာ ဆန္ဒပြ
Tuesday, 01 February 2011 02:06 မောက္ခ နိုင်ငံတကာသတင်း
မူဘာရခ်ကို ဆန့်ကျင်သူ အင်အားစုများ အားကောင်း လာပြီး၊ စစ်တပ်က ပထမဆုံးအကြိမ် ဆန္ဒပြသူတွေကို မပစ်ဘူးလို့ ကြေငြာလိုက်သည်။ စစ်တပ် လူထုဘက် ပါသွားတဲ့အတွက် အစိုးရက ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်များနဲ့စကားပြောဖို့ ချက်ချင်း ကမ်းလှမ်းလိုက်သည်။
ယနေ့အင်္ဂါနေ့ အီဂျစ်လူထုရဲ့ သန်းချီ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆန္ဒပြပွဲအစီအစဉ်ကို စစ်တပ်က မပစ်ခတ်ဘဲ ကြားနေဖို့ ကြေငြာပြီးနောက် ဒုတိယသမ္မတသစ် အိုမာ ဆူလီယန်မန်က ဆွေးနွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆန္ဒပြသူများက မူဘာရခ် အပြီးတိုင် ဆင်းပေးရေးကို ဆက်တောင်းဆိုသွားမည် ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်အတွင်း အားကောင်းတဲ့ မူဆလင် ဘရားသားဟုဒ် အဖွဲ့၊ ဘာသာရေး မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့များ၊ အခြား အတိုက်အခံများမှာ နိုဘယ်ဆုရှင် မိုဟာမဒ် အယ်လ်ဘာရာဒေး ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ညီညွတ်မှုရရှိပြီး ယနေ့ လူတစ်သန်း ကျော် ဆန္ဒပြပွဲကို စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒုတိယသမ္မတရဲ့ မိတ်ဆွေ အငြိမ်းစား သံတမန်ကြီး မိုဟာမဒ် ရှိုခရေး က “စစ်တပ်ဟာ ရုပ်သေးမဟုတ်သလို၊ နွားလည်း မဟုတ်ဘူး။ မူဘာရခ်အပါအ၀င် ဘယ်သူ့လက်ထဲမှာမှ စစ်တပ် မရှိဘူး။ ပြည်သူ့စစ်တပ်ပဲ ဖြစ်ရမယ်။ စစ်တပ်ဟာ လူငယ်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်ပဋိပက္ခဖြစ်စရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိဘူး။ လူထုကို ပစ်သတ်ဖို့နဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ဖို့ထက်၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေက မူဘာရခ် နှုတ်ထွက်ဖို့ပဲ တောင်းဆိုလိမ့်မယ်” ဟု The News York Times ကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က စတင်ခဲ့တဲ့ အီဂျစ် ဆန္ဒပြပွဲမှာ တစ်ပတ်အတွင်း အောင်ပွဲများနှင့်အတူ စနစ်တကျ ဆန္ဒပြမှု အရှိန်အဟုန် ပိုမြင့်လာသည်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ယိုယွင်းမှု၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ အစိုးရခြစားမှုများနဲ့ အတူ မူဘာရခ် ပြုတ်ကျရေး ကို မနေ့က ကြွေးကြော်အော်ဟစ်ကြသည်။
အမေရိကန်ပတ်စပို့ကိုင်ထားတဲ့ အီဂျစ်များက အဝေးက ညာသံပေးမနေဘဲ တိုင်းပြည်ပြန်လာပြီး ဆန္ဒပြပွဲ ၀င်နွှဲကြသည်။ စစ်တပ်နဲ့ လူထုမှာ တော်လှန်ရေးတွင် တစ်သားထဲ ဖြစ်သွားသည်။
တံခါးပိတ် လွှတ်တော်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
ဗြိတိသျှ-ကိုလံဘီယာဖွား အမျိုးသားတစ်ဦး၏ အိမ်ရှေ့မြက်ခင်းပေါ်တွင် ခွေးတစ်ကောင်အား ရေခဲတုံးအတွင်း ပုံသွင်းကာ ထားရှိခဲ့သည်ကို ရဲများက တွေ့ရှိခဲ့
ကနေဒါနိုင်ငံမှ အာဏာပိုင်များသည် ထူးထူးခြားခြား တိရစ္ဆာန်ညှင်းဆဲ သတ်ဖြတ်မှု တစ်ခုကို စုံစမ်းနေကြောင်း သိရသည်။ ဗြိတိသျှ-ကိုလံဘီယာဖွား အမျိုးသားတစ်ဦး၏ အိမ်ရှေ့မြက်ခင်းပေါ်တွင် ခွေးတစ်ကောင်အား ရေခဲတုံးအတွင်း ပုံသွင်းကာ ထားရှိခဲ့သည်ကို ရဲများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဇန်န၀ါရီလ (၁၅)ရက်နေ့က ရေခဲတုံးကြီးထဲ ရုပ်လုံးသွင်းခံထားရရှာသည့် သနားစရာခွေး၏ ရုပ်အလောင်းကို တွေ့ရှိပြီးနောက် အိမ်ရှင်က ရဲတပ်ဖွဲ့အား အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း ဗြိတိသျှ-ကိုလံဘီယာ ရဲဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အမျိုးသမီး မာဆီမိုရီယက်တီက ပြောကြားခဲ့သည်။
(ရေခဲတုံးအတွင်းမှ ခွေးအား တွေ့ရစဉ်)
ခွေးတစ်ကောင်လုံး ထည့်ထားသည့် ရေခဲတုံးကြီး ထိုအိမ်ရှေ့ ရောက်နေခြင်း၏ အကြောင်းကိုမူ မသိရသေးချေ။ “တော်တော်ရက်စက်ပြီး အကြင်နာတရားမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ။ ခွေးကို အလုံပိတ်ထားတဲ့ ရော်ဘာပုံးကြီးတစ်ခုထဲထည့်ပြီးတော့ ရေအပြည့်ဖြည့်ခဲ့ပုံပါ။ ပြီးတော့ ဒီရေတွေကို ခဲတဲ့အထိ အအေးခံလိုက်တော့ ခွေးကို ရေခဲရိုက်ပြီးသား ဖြစ်သွားတာပေါ့။ သေသွားရှာတာက အလတ်စားလောက်ရှိတဲ့ အမည်းရောင် ခွေးတစ်ကောင်ပါ”ဟု သူမကဆိုသည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါတို့မှ တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေး တောင်းဆိုသည့် အဖွဲ့များက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ခွေးမှာ သေပြီးမှ ရေခဲရိုက်ခံရခြင်းလား၊ အရှင်လတ်လတ် ရေခဲရိုက်သဖြင့် အအေးမိ သေဆုံးခြင်းလားဆိုသော အချက်ကို ထောက်လှမ်းဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
Burma Issues and Concerns Vol 6
Issues and Concerns Vol 6
အေအေပီပီမှ “၂၂၀၀ကျော်ကို အခုလွှတ်!” အစီရင်ခံစာအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆို၍ ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေ
AAPP Press Release on Release over 2200 PPs Now!-Bur
၀လမ်းကို ဖြတ်သန်းခြင်း( အောင်ခိုင်မြင့်)
ဘ၀လမ်းကို ဒဿနဗေဒနဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဒဏ်ရာ ဝေဒနာတွေ ပြည့်နှက်
စိတ်အစာ မကြေမှုများ အဖော်ပြု
ဘ၀ကို ပန်းပုလို ထုဆစ်ရင်း
ပျော်ရွှင်ခြင်း လမင်းလည်း သာမယ်..။
သောက မုန်တိုင်းလဲ လာမယ်...။
ရှားပါး ပစ္စည်းထက် ရှားပါးချိန်မှာ
( ခေတ်တံတိုင်းကို ထိုးဖောက်ထွက်သွား ကဗျာမြင်းများ ကဗျာစာအုပ်မှ )
How to search proxy by your self (site, IP & Port No.) ?
by Humanrights Myanmar on Tuesday, February 1, 2011 at 3:06am
နေပြည်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော် အဆောက်အအုံတွင် တနင်္လာနေ့က ကျင်းပသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးအတွင်း ဥက္ကဋ္ဌ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဦးခင်အောင်မြင့်က--
“နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဟာ ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းပေးရုံသာမက အမြော်အမြင်
ကြီးမားပြီး စေတနာထက်သန်စွာနဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံနဲ့ အသုံးအဆောင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်တော်များအတွက် အစစ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးမှုများကို ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း တွေ့ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဤပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကြီးက နိုင်ငံတော်
အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကို အထူးကျေးဇူး ဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်း လေးစားစွာ ပြောကြားလိုပါတယ်။” ဟု ဦးခင်အောင်မြင့်က ပြောကြားသွားသည်။
တပ်မတော် စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေးဌာန အကြီးအကဲဟောင်း အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ် ခင်အောင်မြင့်မှာ သဘောထား တင်းမာသူဟု လူသိများပြီး ၂ဝဝ၃ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်း ကွပ်ကဲရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူဟု စွပ်စွဲခံရသည်။
မင်းတြားကြီး သန်းရွေှ့ နဲ့ နေပြည်တော် ခိုးသားများ အ...
အမေရိက နေထိုင်တဲ့ အီဂျစ်များ အဝေးက ညာသံပေးမနေဘဲ တိ...
ဗြိတိသျှ-ကိုလံဘီယာဖွား အမျိုးသားတစ်ဦး၏ အိမ်ရှေ့မြ...
အေအေပီပီမှ “၂၂၀၀ကျော်ကို အခုလွှတ်!” အစီရင်ခံစာအား အ...
How to search proxy by your self (site, IP & Port ...